Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyadaha Turkiga ee Yurub oo Bilaabay U Codaynta Aftida Dastuurka.
Jaaliyadaha Turkiga ee Yurub oo Bilaabay U Codaynta Aftida Dastuurka.
Jaaliyaadka Turkiga ee ku nool lix dal oo Qaarada Yurub kamid ah ayaa billaabay in ay codkooda ka dhiibtaan aftida, ayadoo ololihii arrintaasi ku saabsan uu sababay muran caalami ah.
Shacabka ayaa u codeynaya haddii ay doonayaan in Turkiga uu ka wareego awoodda baarlamaanka oo la kordhiyo midda madaxweynaha, taas oo xoojineysa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Qiyaastii seddax milyan oo qof ayaa codkooda ka dhiibanaya dibadda Turkiga, kala badh kamid ah waxay ku nool yihiin wadanka Jarmalka.
Ololaha siyaasadeed ee dalalka qaar ayaa Turkiga laga hor istaagay. Tallaabadaasi ayaa sababtay khilaaf iyo isku dhac siyaasadeed oo xooggan kaas oo kala dhex galay xukuumada Turkiga iyo dalal kamid ah Midawga Yurub.
Madaxweyne Erdogan ayaa Jarmalka iyo Holland ku eedeeyay in ay u dhaqmayaan sida Naazigii oo kale. Dalka Switzerland waxaa Axaddii lagu qabtay olole lagu taageerayo in “maya” loogu codeeyo isbedelka dowladda ay sameyneyso. Ololahaas oo kumannaan qof ay ka qeybgaleen waxaa hor kacayay Kurdiyiinta.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, oo u yeedhay diblumaasiyiinta Switzerland ee Ankara ku sugan ayaa codsaday tallaabo sharciyeed in la qaado. Wuxuu sheegay in dibadbaxa ay agaasimeen kooxda la mamnuucay ee PKK oo Turkiga, midowga Yurub iyo Mareykanka ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso. Balse dalka Switzerland ayaan PKK u aqoonsaneyn in ay argagixiso yihiin.
Laba maalmood ka hor, dowladda Switzerland waxay sheegtay in ay baadhayso eedaymo ku saabsan in la jaajuusay dadka Turkida ah ee ku nool dalkeeda ee dowladda Turkiga sida adag uga soo horjeedo. Ayadoo muranka noocaas ah uu jiro, ayaa hadana waxay codeynta ka billaabatay garoomada, xuduudaha Turkiga, iyo safaaradaha ay ku leeyihiin Jarmalka, Austria, Belgium, Faransiiska Switzerland iyo Denmark.